Waxyaabaha ugu Muhiimsan Warbixinta Tusmada Macaamiisha Bulshada | Martech Zone
Talaado, Janaayo 28, 2014 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Anagoo adeegsaneyna barnaamijyada dhageysiga bulshada, maalin kasta waxaan cadeeynaa cabashooyinka, khaldanaanta, codsiyada adeegga ama amaanta loo jeediyo shirkadaha aan ka helin wax jawaab ah ganacsiga la bartilmaameedsaday. Inkasta oo macaamiisha ay hadda xukumayaan warbaahinta bulshada, ganacsiyada ayaa uga sii daraya jawaab celinta. Sida laga soo xigtay Sprout Social - 4 ka mid ah 5 codsi ayaa looga jawaabi waayey! Xaashida
Kuwani waa tilmaamo ka Warbixinta Kaqeybgalka Tusmada Bulsho Bulsheedka, siinta aragti ka dambeysa macaamiisha bulshada maanta, koritaanka degdegga ah ee ka-qaybgalka macaamiisha soo galaya iyo sida ay magacyadu uga jawaabaan.
Jaantuska 'Sprout Social Index' wuxuu eegaa kobaca kanaalka, ka jawaab celinta astaamaha, iyo dabeecadaha macaamiisha in ka badan 160 milyan oo farriimo soo-gal ah oo ku saabsan dhammaan noocyada astaanta 20,000 iyo bogagga taageerayaasha Qiyaasta macaamiisha ay ku qaadanayaan baraha bulshada si ay u weydiistaan ​​caawimaad, ay u gaaraan go'aano iibsi, cabashooyinka, iyo wadahadal socda waa mid cajiib ah.
Tags: Customerhawlgelinta macaamiishasprout index bulshadabulsho ahaan